Etazonia Maro ny Malagasy hangoron�entana
Teratany vahiny maro no mitaintaina taorian�ny nahavoafidy an�i Donald Trump ho filoham-pirenena amerikanina.
Tsy vitsy ny teratany Malagasy amin’izy ireo. Famerimberin’ity filoha faha-45 any Etazonia ity nandritra ny fampielezan-keviny fa dia tsy misy toerana ho an’ireo vahiny tsy manan-taratasy ara-dalàna hipetrahana any Etazonia, fa dia horoahiny. Raha mitazona ny teniny i Donald Trump, dia betsaka no hangoron’entana, misy Malagasy amin’izy ireo. Nisy mpiasa tamin’ny ambasady ny sasany saingy nanao sambo nilentika rehefa vita ny iraka nampanaovina azy tany Etazonia.